Pnpkhabar.com | Popular Nepali Portal के हो मस्तिष्कघात ? यस्ता छन् बच्ने उपाय - Pnpkhabar.com
के हो मस्तिष्कघात ? यस्ता छन् बच्ने उपाय
मस्तिष्कको कार्यक्षमतामा अचानक आएको ह्रासलाई चिकित्सकीय भाषामा मस्तिष्क घात भनिन्छ। मस्तिष्क घात भएका अधिकांश बिरामीलाई पक्षघात पनि हुने हुँदा यो रोगलाई पक्षघात, प्यारालाइसिस, लकुवा जस्ता नामले पनि सम्बोधन गरिन्छ।
मस्तिष्कमा रक्त प्रवाहमा अवरोध भएपछि उत्पन्न हुने समस्या नै मस्तिष्कघात हो । रगत प्रवाह रोकिने बित्तिकै मस्तिष्कका कोशिकाहरुमा अक्सिजन प्रवाह हुन सक्दैन र मस्तिष्कका तन्तुहरु मर्न थाल्छ । समयमै उपचार गरिएन भने बिरामीको मृत्यु समेत हुने गर्छ ।
डाक्टरहरूका अनुसार मस्तिष्कघात हुँदा ५० प्रतिशत मानिसको मृत्यु तुरून्तै हुन्छ भने ५० प्रतिशत अस्पताल आइपुग्छन् । अस्पताल आइपुगेकामध्ये ५० प्रतिशतलाई बचाउन सकिन्छ । ब्लडप्रेसर भएका ३० देखि ३५ प्रतिशतलाई ब्रेन एट्याक हुनसक्छ ।
सामान्यतया मस्तिष्कघातले एकैपटक मानिसलाई आक्रमण गर्छ । तर, त्यो भन्दा पहिला मानिसलाई केही समय एउटा आँखा देख्न छाड्छ र केही समयपछि फेरि देख्न हुन्छ । त्यसैगरी केही समयका लागि एउटा पाटो नचल्ने हुन्छ र क्रमशः फेरि चल्न थाल्छ । केही समयसम्म यस्तो प्रक्रिया दोहोरिरहन्छ भने त्यो ब्ने एट्याकको स्पष्ट पूर्व संकेत हो । यस्तै अचानक सहनै नसक्ने गरी छुट्टै तरिकाले टाउको दुख्नु, रिंगटा लाग्नु, शारीरिक सन्तुलन बिग्रिएर ढल्नु, शरीरको एक पाटोमा झमझम गर्नु, निदाउनु वा कमजोरी देखापर्नु, होस हराउनु, एकाएक दृष्टि धमिलो हुनु, बोली लटपटिनु वा बोल्न नसक्नु, वान्ता हुनु, बेहोस हुन, प्यारालाइसिस हुनु मस्तिष्कघातका लक्षण हुन् ।
सावधानी तथा बच्ने उपाय
१, ४० वर्ष उमेर पुगेपछि नियमित रक्तचाप, मधुमेह, कोलेस्टेरोलको जाँच गराउने गरौं। जोखिम भएको पाइएमा यसलाई नियन्त्रण गर्न चिकित्सकको सल्लाहअनुसार औषधी खाऔं वा जीवनशैली परिवर्तन गरौं। औषधी सेवन गरी यी रोग नियन्त्रित भए पनि आफूखुसी औषधी खान छाड्ने नगरौं।
२, धूमपान, मद्यपान, सूर्ति र नशालु पदार्थ सेवन नगरौं।
३, शरीरको तौललाई आफ्नो कदअनुसार नियन्त्रणमा राखौं।
४, नियमित हल्का व्यायाम गर्ने बानी बसालौ तर जोखिममा परेकाले भुलेर पनि कठिन व्यायाम गर्नुहुँदैन।
५, स्वस्थ्यकर खाना खासगरी मसिनो मीठो भन्दा खस्रो मोटो खाना, हरियो सागसब्जी, फलफूल, रेसा र चोकरयुक्त भोजनलाई प्रश्रय दिऔं। तेल, घिउ, बोसो जस्ता चिल्ला पदार्थ कम खाऔं। भिटामिन इ युक्त पदार्थलाई खानामा अवश्य समावेश गरौं।
६, तनावलाई बाई–बाई गरौं। विश्रामलाई वेलकम गरौं। जोखिमपूर्ण जीवनशैली र व्यक्तित्व भएकाहरुले जीवनशैली परिवर्तन गरौं।
७, चिसोबाट जोगिऔं, चिसोमा रक्तनलीहरु साँघुरिएर रक्तचाप बढ्न गई मस्तिष्क घातको समस्या ज्यादा देखिन्छ।
८, मष्स्तिक घातका जोखिम मानिने शारीरिक समस्या, जस्तै– नसाभित्रै रगत जम्ने रोग, मुटु तथा रक्तसञ्चारसम्बन्धी रोग, जस्तै– एट्रियल–फ्रिविलेसन, अथेरोस्क्लेरोसिस, डिपभेन थम्वोसिस, एन्युरिजम, लेफ्ट भेन्ट्रिकुलार डाइलाटेसन जस्ता समस्या बेलैमा निवारण गर्नतिर लागौं।
५० शैय्याको अर्घाखाँची अस्पतालमा दरबन्दीका एउटै चिकित्सक छैनन्
भक्तपुरमा ट्राफिक प्रहरीको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण